Fiofanana Mpampianatra Sekoly Alahady 2016 - Fandaharana Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
31 oktobra – ANDRON’NY REFORMASIONA
Toriteny Alahadin’ny olona masina – 06/11/2016 – Past. RASETA
Fiofanana Mpampianatra Sekoly Alahady 2016 – Fandaharana
Hoy Jesosy: « … mianara Amiko … » Matio 11:29b.
Ny Fileovana Marseille indray no handray ny fiofanan’ny mpampianatra Sekoly Alahady eto anivon’ny Synodam-paritany FLM Eoropa, ny sabotsy 12 sy alahady 13 novambra 2016 ho avy izao.
Andrasana any Gemenos, toerana manokana handraisana ny fiofanana, ireto mpampianatra izay hanainga avy any amin’ny isam-piangonany avy.
Manamarika ity fiofanana ity moa ny hitobiana ao amin’ny toerana iray, izay sady isakafoanana, no iofanana, no atoriana. Izany no atao, dia ny mba ahafahana miombona anaty firaisana tanteraka ka ampiasàna tsara ireo fotoana rehetra, mba tsy hisy ho very. Ao koa no ifankahafantaran’ny samy mpampianatra sy ifampizaràna traikefa.
Efa samy miomana ireo mpampianatra avy amin’ny fileovana efatra (Ile-de-France, Marseille, Paris, Strasbourg) hanjohy ny toeram-piofanana: hanovo hery, hianatra, handray fampaherezana, hivavaka sy hihira, …
Raha fehezina, hianatra amin’i Jesosy no atao. Kendren’ny Sekoly Alahady moa ny:
Ahafantaran’ny zaza izay maha-mpanota azy eo anatrehan’Andriamanitra,
Hanondro an’i Jesosy ho làlana iray tokana hahazoan’ny mpanota famelan-keloka sy fahamarinana,
Hitaiza ny ankizy amin’ny fahalalana ny hasarobidin’ny batisa izay maha-zanak’Andriamanitra azy,
Hampahazatra azy handinika ny Soratra Masina sy hivavaka hitomboany amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra,
Hitarika ny ankizy hanolotra ny tenany sy ny fony ho an’i Jesosy noho ny finoany Azy ka hijoro vavolombelon’i Kristy amin’ny fiainany manontolo.
Avy eto amintsika dia hisy MSA telo mianadahy hanatrika io fotoana io. Antenaina fa hitondra fanavaozana amin’ny fiainam-panahy sy ny fampianarana eto an-toerana indray izao famonjena fiofanana izao. Mitondra am-bavaka azy ireo isika amin’izany.
Azo raisina eto ary ny fandaharana ho an’izany fiofanana izany: fandaharana-fiofanana-msa_12-13-nov-2016_
Noho izay antony izay dia tsy hisy Sekoly Alahady eto amin’ny FLM Orléans ny Alahady 13 novambra 2016.